AyisiyoMveliso eChongiweyo kuphela kodwa neeNkonzo eziCwangcisiweyo-Iindaba-NingBo COFF Machinery Co., ltd
AyisiyoMveliso eChongiweyo kuphela kodwa neeNkonzo eziCwangcisiweyo
Ixesha: 2021-06-01 I ngxelo: 30
Umthengi omnye wase-Austrian we-COFF ugcwele iresiphi yebhiya ekhutshwe yinjineli ye-COFF. Iresiphi isekwe kulwazi lwamayeza emveli aseTshayina, kusetyenziswa ijinja kunye nemihla ebomvu yokongeza incasa.
I-COFF ayonelisekanga kukubonelela ngeetanki zebhiya ezikumgangatho ophezulu nangona iseyinto yokuqala ebalulekileyo. Ngoku ngokwemfuno ethile yomthengi ngamnye, i-COFF izama ukuhlangabezana neemfuno zabo ngokwahlukeneyo, isebenzisa iminyaka yamava kunye nezixhobo.
Umthengi waseJapan ongazukukwenza't konw ngokucacileyo indlela yokudibanisa imibhobho kunye nokufakwa, injineli yeCOFF yenza umzobo ocacileyo we-3D ophawule lonke unxibelelwano neesimboli. Nokuba kufakelwa ii-vedios ezithile kuthathwa ngokukodwa ukubonisa indlela. Ngemizobo kunye neevedios, indawo yabaxumi't ubuze nayiphi na imibuzo malunga nofakelo.
Omnye umthengi waseThailand yincutshe yokupheka utywala, onokuqonda kwakhe malunga nezixhobo kunye nenkqubo yotywala. Imfuno yakhe yahluke mpela kwabanye abathengi, ubukhulu becala izixhobo ezingamiselwanga kunye namalungu. I-COFF engieer ixoxe naye ngomonde nazo zonke iinkcukacha kwaye unxibelelane nabanye abathengisi ngotshintsho oluhlaziyiweyo. Ekugqibeleni umthengi wanelisekile ngesiphumo.
Umthengi waseAustria unebrewpub kwaye usixelele ukuba kuhlala kukho iindwendwe zaseAsia eziya kwindawo yakhe yokupapasha, ke yena ufuna ukuphuhlisa uhlobo lwebhiya lokutya kubathengi bakhe. Sicebisa uhlobo oluthile lobhiya ngokuthanda ijinja kunye nemihla ebomvu, ethi ngokutsho kwamayeza amaTshayina anokuzalisa amandla, ukondlad kwaye uthomalalise imithambo-luvo. Enye yeCOFF's iinjineli ezinamava okuphuza zibonelela ngeresiphi, esekwe apho umthengi ekhuphe ibhetshi yokuqala. Umthengi uthe ibhiya yongeze imfihlo yaseMpuma kwindawo yakhe yokupapasha.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nemveliso yeCOFF, pls qhagamshelana jessie@nbcoff.com
Previous: Umnxibelelanisi womntu
Okulandelayo: Inkqubo yokuFudumeza ioyile ye-300L kufutshane nokugqitywa kweNdwendwe zase-Austria